Samsung Galaxy Fold: Nkọwa, ọnụahịa na ụlọ ọrụ gọọmentị | Akụkọ akụrụngwa
Eder Esteban | | General, Telephony
Ihe omume Samsung Unpacked na-ahapụ anyị na ọtụtụ akụkọ. Firmlọ ọrụ Korea enyelarị smartphones ọhụrụ ọgbara ọhụrụ. N'etiti ụdị ndị a, anyị na-ahụ Galaxy Fold, ika nke mbụ mpịachi ama. Ekwentị nke anyị na-anụ asịrị maka ọnwa ọ mechara bụrụ onye ọrụ. Yabụ anyị maara ekwentị ahụ n'uju.
Fold a Galaxy na-aghọ ihe nlele mbu nke ahịa, na-ebute ụzọ na ụdị ndị ọzọ ga-abata na MWC. Ọ bụụrụ Samsung ezigbo nsogbu. A elu nke nso na-abịa na-na-akpali imewe. Kedu ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na ngwaọrụ a?
Na ụbọchị ndị gara aga, foto nke ngwaọrụ ahụ abanyego, tinyere ụfọdụ n'ime nkọwa ya. Yabụ na anyị enweelarị echiche banyere ya. N'ikpeazụ, na nke a Samsung omume na San Francisco anyị nwere ike ịmụta ihe niile banyere nke a na-echere mpịachi ama nke ika.
2 Galaxy Fold: Samsung nke mpịachi ama dị adị
Samsung amalitela ịmaliteghachi ọnọdụ ya na ahịa gam akporo, nke ọganihu na-eyiwanye egwu site na ọganihu nke ụdị dịka Huawei. Ya mere, n'afọ a, ha hapụrụ anyị mmụgharị nke usoro ha. Ewerelarị nzọụkwụ mbụ ejiri Galaxy Fold a. Nkọwapụta ya zuru ezu bụ:
Galaxy Fold: Samsung nke mpịachi ama dị adị
Mgbe otutu ntule banyere ekwentị a na ọnwa ndị a, ọ mechara bụrụ eziokwu. Uzo di elu nke akpọrọ ka gbanwee usoro gam akporo. Echiche nke a Fold Galaxy bụ inwe ike ịnwe ngwaọrụ nwere ikike imeghari ụdị ọnọdụ niile. Mgbe apịaji enwere ike ijide gị n'ọbụ aka gị yana mgbe emepere ya, ị nwere ike ile vidiyo na ụzọ kachasị mma.
Samsung akọwapụtawo Fold Galaxy a dị ka ama, mbadamba na igwefoto n'otu ngwaọrụ. Nkọwa dị mma maka ihe nlereanya a. Ime ọtụtụ ihe dị mkpa maka ngwaọrụ, dịka egosiri na ngosi. Ya mere, Samsung ga-ekwe ka ngwa atọ meghee n'otu oge mgbe ejiri ya na ọnọdụ mbadamba. Nke na-enye gị ohere iji ngwa ndị kachasị mkpa n'otu oge ngwa ngwa na ngwaọrụ ahụ.
Maka nke a ga-ekwe omume, Samsung arụ ọrụ na ụlọ ọrụ dịka Google na Microsoft na usoro a. Nke a na - eme ka ọ dịkwuo mfe ịnwe ọtụtụ ọrụ a na ekwentị. Na mgbakwunye, onye ọrụ ga-enwe ike ịchọpụta nha ọ chọrọ iji na windo ọ bụla. Yabụ ị nwere ike ịme ndị buru ibu dabere na mkpa gị. Naanị ịkwesịrị ịgbatị na nkuku. Enweela windo na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, nke mere na a na-ahapụ ọdịnaya nke ngwa ahụ ka ọ nọgide na-adịgide adịgide ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị agbanye ma ọ bụ mepee ngwaọrụ ahụ n'oge niile. Ọ dị ezigbo mma na nke a.
Ogige Galaxy bịara na ngụkọta nke ese foto isii, dị ka Samsung gosipụtara na nkwupụta ya. Igwefoto atọ dị n'azụ, abụọ n'ime na otu n'ihu. Yabụ ị nwere igwefoto maka akụkụ ọ bụla na ekwentị gị. Photography nweela pụrụ iche mkpa na ngwaọrụ. Ya mere, anyị nwere ike iji foto site n'akụkụ ọ bụla were foto na-enweghị nsogbu ọ bụla. Ha na-ejikọta ụdị mmetụta dị iche iche, dị ka obosara sara mbara na telephoto. Yabụ anyị nwere ike iji foto were ụdị foto dị iche iche. O doro anya na otu n'ime ike ya.
Batrị bụ akụkụ ọzọ dị mkpa nke ekwentị. Ebe ọ bụ na o siri ike itinye batrị na ihe nlereanya dị ka Galaxy Fold, nke na-ehulata. Ya mere, Samsung ahọrọla batrị abụọ. Ike ya niile dị 4.380 mAh. Nke mere na enwere nnwere onwe dị mma maka ngwaọrụ n'oge niile. On ọnụnọ nke ngwa ngwa odori na ya anyị na-enweghị nkọwa na oge.
Ozugbo amatara nkọwa niile gbasara akara Korea a, anyị kwesịrị nnọọ ịmata mgbe ọ ga-oru na ahịa. Enweela ọtụtụ asịrị banyere mmalite nke Agba Galaxy a na ahịa na ọnwa ndị a. Mana n'ikpeazụ, a maara nke ọma na ozi a.
Enweekwara ọtụtụ asịrị banyere ọnụahịa nke nnukwu ụlọ ahịa a na okwu. Anyị maara na ọ gaghị abụ ama ama. Mana obi dị ụtọ, anyị nwere data na-agwa anyị karịa maka ọnụahịa Samsung Galaxy Fold a. Ọ ga-abụ na ọ gaghị adị oke ọnụ karịa ka atụrụ anya?
Dị ka a mụtara na ihe omume ahụ, anyị nwere ike na-atụ anya a price si $ 1.980 na njedebe a. Ha dị ihe dị ka euro 1.750 ịgbanwe, ọ bụ ezie na ọnụahịa na euro egosibeghị. Ya mere, ọ ghọrọ smartphone dị oke ọnụ nke akara Korea ruo ugbu a. Mbido ya ga-eme eze na Eprel 26. Ya mere, ị ga-echere ọnwa ole na ole ruo mgbe ọ gara ụlọ ahịa. A na-atụ anya na ọ ga-enwe ike idobe n'oge na-adịghị anya.
Ọ ga-adị na agba anọ: acha anụnụ anụnụ, ọla edo, oji na ọlaọcha. Ndị ọrụ ga-enwe ike ịhazi mpaghara bezels nke ngwaọrụ ya agbachi. Ya mere, ha nwere ike ịhọrọ agba ha chọrọ na mpaghara ekwentị a. Ihe na-doro anya na-eme ka ọ ọbụna ihe adịchaghị na nanị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Nke a bụ Galaxy Fold, Samsung nke mpịachi ama
Nkechi okonkwo dijo
Are na-ngwa ngwa xD
Zaghachi Randy Jose